Siyaasadda, amniga, xuquuqda aadanaha iyo caqabadaha bani’aadamnimo ’ayaa ku habsaday Mali - Wardeeq 24 TV Siyaasadda, amniga, xuquuqda aadanaha iyo caqabadaha bani’aadamnimo ’ayaa ku habsaday Mali Wardeeq 24 TV
Home Xulashada Siyaasadda, amniga, xuquuqda aadanaha iyo caqabadaha bani’aadamnimo ’ayaa ku habsaday Mali
Siyaasadda, amniga, xuquuqda aadanaha iyo caqabadaha bani’aadamnimo ’ayaa ku habsaday Mali
Madaxa Hawlgallada Nabadda ee Qaramada Midoobay, Jean-Pierre Lacroix, wuxuu xusuustay in Jimcihii, argagixiso aad u hubaysan ay weerareen xero UN-ka ee xasilinta (MINUSMA) oo ku taal gobolka Kidal, halkaas oo ay ku dileen afar ka mid ah nabad-ilaaliyayaasha Chad, 34 kalena ku dhaawaceen.
Waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid naxdin leh, isla markaana uu ahaa “tusaale geesinimada iyo go’aan qaadashada ciidamadeena nabad ilaalinta si ay u taageeraan dadka reer Mali”, isagoo xusay in “difaacii go’aanka iyo geesinimada lahaa uu dib u dhac weyn ku reebay kuwii soo weeraray”.
Khatarta argagixisada waxaa sii dheer, Mr. Lacroix wuxuu walaac ka muujiyay sii socoshada “howlaha xasilloonida ee maleeshiyaadka” ee ka howlgalaya qowmiyadaha ku nool gobolka dhexe ee xasilloonida ka jirta.
Si loo hubiyo in maleeshiyaadka iyo kooxaha hubaysan ay hubka dhigaan oo ay ku biiraan geeddi socodka wadahadalka, wuxuu ugu yeeray dowladda ku meelgaarka ah inay hagaajiso xaaladda nabadgelyada iyada oo ay barbar socoto ilaalinta dadka rayidka ah iyo soo celinta maamulka Gobolka iyo adeegyada bulshada ee aasaasiga ah.
Wuxuu ku adkeystay in amniga muddada dheer ee dalku ku tiirsan yahay guusha kala-guurkiisa siyaasadeed ee jilicsan.
Dowlada Mali ayaa raadineysay dib u soo celinta xasiloonida iyo dib u dhiska kadib dib u dhacyo isdaba joog ah tan iyo horaantii sanadkii 2012, oo ay ka mid yihiin afgambi militari, dagaal ka soo cusboonaaday ciidamada dowlada iyo fallaagada Tuareg, iyo la wareegida dhulkeeda waqooyiga ee kooxaha xag jirka ah.
Waxyaabaha kale, howlgalka UN-ka, oo loo arko inuu yahay howlgalka ugu halista badan ee UN-ka ee lagu adeegto, wuxuu taageeraa hirgalinta heshiiskii nabadeed ee 2015 ee ay kala saxiixdeen maamulada iyo labo isbaheysi ee kooxaha hubeysan.
In kasta oo uu tilmaamayo “calaamado dhiirrigelin ah” dhowaanahan, oo ay ku jiraan bilowga dhowr hay’adood oo muhiim ah, wuxuu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib-u-habeynta siyaasadeed iyo hay’adaha, sida dib-u-habeynta dhulka iyo sidoo kale isbeddelada sharciga iyo dastuurka.
Wuxuu yiri “lama soo saarin jadwalka rasmiga ah ee doorashada”, inta heshiis laga gaarayo dib-u-habeynno kala duwan, oo ay ku jiraan maareynta codbixinta.
“Xilligan adag, waxaan ku dhiirigalinaynaa jilayaasha siyaasadeed ee reer Mali inay ku shaqeeyaan niyadsam iyo isbadal lagu doonayo in lagu abuuro jawi ku habboon nabada, loo dhan yahay, daah furnaan iyo kalsooni leh,” ayuu yiri taliyaha nabad ilaalinta.
“Doorashooyinkani waxay ka dhigan yihiin tijaabinta marxaladda kala guurka ee hadda jirta iyo tallaabada lagama maarmaanka u ah ku laabashada Mali ee xukunka dastuurka”, ayuu yiri
Previous articleSuudaan: Dagaalada ka socda Galbeedka Darfur waxay kicinayaan tirada dhimashada ee sii kordheysa
Next articleHelitaanka tamarta la cusbooneysiin karo ee la-qabsiga cimilada Afrika: madaxa UN